Weerar Duqeyn Diyaaradeed ah oo ka Dhacday Fariisimo Al-Shabaab ku leeyihiin G/Gedo.
Diyaaradaha nooca aan duuliyaha laheyn ee Dronis-ka ayaa habeenkii xalay aheyd waxay duqeymo diyaaradeed ka fuliyeen deegaan ka tirsan Gobolka Gedo, sida ay sheegayaan wararaka aan halkaas ka heleyno.
Duqeyntaas ayaa ka dhacday deegaan ku yaalla duleedka Ceelcade ee Gobolka Gedo, kaasi oo la sheegay inay fariisimo ku lahaayeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab, isla markaana lala eegtay duqeyntaas.
Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya inay xalay ay maqlayeen Jug Culus oo gantaalo ah, sidoo kalena ay arkayeen diyaarado joog hoose ku socda, isla markaana ay dareem cabsi xoogan.
Weli lama oga Khasaaraha ka dhashay duqeyntii ka dhacday deegaan ku yaalla duleedka Ceelcade ee Gobolka Gedo, halkaas oo la wararka qaarkood ay sheegayaan inay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab.
Dhanka kale Diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha laheyn ee ay leedahay dowladda Mareykanka ayaa dhowr jeer oo horey duqeymo kala duwan ka fuliyay deegaano ka tirsan Gobolada dalka Soomaaliya, waxaana duqeymahaas qaarkood lagu dilay xubno ka tirsan Al-shaabab.